कोरोना संक्रमण भै अस्पतालमा भर्ना भएकी पूर्वरानी कोमल आइसियूमा, भयो सास फेर्न मुस्किल – Classic Khabar
April 29, 2021 241
कोरोना भाइरस संक्रमित पूर्वरानी कोमल शाहलाई आइसियूमा सारिएको छ। उनलाई अक्सिजनको मात्रा कम देखिएपछि आइसियूमा राखेर उपचार थालिएको अस्पतालले जनाएको छ ।‘उहाँ (कोमल)मा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएको र अक्सिजनको समेत कमी देखिएपछि आइसियूमा सारिएको हो । अहिले उहाँलाई हाई फ्लो अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको छ ।
बाँकी स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन,’ नर्भिक अस्पतालले भनेको छ ।अहिले उहाँलाई हाई फ्लो अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको छ । बाँकी स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । अस्पतालमै उपचाररत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था भने सामान्य र स्थिर छ’, नर्भिक अस्तालले भनेको छ ।‘अस्तिसम्म प्रतिमिनेट २-३ लिटर अक्सिजन दिए पनि हुन्थ्यो।
तर उहाँलाई समस्या भएपछि हिजो आइसियूमा राख्यौं। अहिले प्रतिमिनेट १० लिटरसम्म अक्सिजन दिनु परेको छ,’ डाक्टर भने। कोरोना संक्रमण भएर सोही अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अवस्था भने सामान्य रहेको छ।
Prevअब लक्ष्मीको कुरा कसले पत्याउने ? किशोर र लक्ष्मीले समाज बिगारे शृजना वाग्लेलाई आरोप लाउन मिल्छ ? (भिडियो सहित)
Nextबिरामीको सेवा गर्दागर्दै नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा कार्यरत ७३ स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कोरोना सङ्क्रमित, आफु संक्रमित भएपनि बिरामीको सेवा गर्न छोडेनन्
कञ्चनपुरमा २५ वर्षीय सशस्त्र प्रहरी जवान मृत फेला
काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण घट्दो घरमा, तर काठमाडौँ बाहिर भने महामारी नै बढ्दो